Dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay dalka Sierra Leone ayaa si wada jir ah loo aasay - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay dalka Sierra Leone ayaa si wada...
Dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay dalka Sierra Leone ayaa si wada jir ah loo aasay
Meydadka in ka badan tobaneeyo ka mid ah 100 kii ku dhintay qaraxii ka dhacay dalka Sierra Leone todobaadkii hore ayaa loo aasay si wadar ah Isniintii shalay aaskaas oo ka dhacay Waterloo.
Naxashka ayaa lagu soo raray gawaadhi ciidan oo laga soo qaaday qolka meydadka ee caasimadda Freetown, waxaana loo waday qabuuro ku yaal Waterloo, oo ah magaalo deris ah Freetown.
Gaadiidka sidey maydadkaa ayaa lasoo mariyey goobtii uu qaraxu ka dhacay, waxaana dadka goobtaas joogey ay istaageen wadada hareeraheeda si ay u sagootiyaan dadkii ku dhintay oo qaybtood loo wadey qabuuraha Waterloo.
Qaraabadii iyo shaqaalahii oo ku labisan dharka baroortdiiqda ayaa sii raacay si ay u aasaan meydka, dadku waxay ku joogeen baabuurta iyagoo ooyaya oo wejiyadoodana daboolay.
Tobaneeyo ah naxashyadii maydadku ku jireen ayaa la safay iyadoo la huwiyey calanka Sierrra Leone oo ay ku qoran tahay “Nabad ku naso”, intii ay socotay xafladda waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Sierra Leone Julius Maadia Bio, iyo mas’uuliyiin kale.
“Waan baadhi doonnaa wixii dhacay,” ayuu Biyo ku yiri hadal kooban oo uu jeediyay intii lagu jiray aaska, wuxuuna ugu baaqay mas’uuliyiinta iyo bulshada inay is kaashadaan; si aan u aragno waxa aynu sameyn karno iyo si aynu uga hortagno masiibooyinkan inagu dhacay.
Qaraxa ayaa dhacay galinkii dambe ee Jimcihii kadib markii booyad ay ku dhacday gaari kale oo xamuul ah, xilli ay ku sii jeedday kaalin shidaal oo ku dhow isgoys mashquul badan oo ku yaalla Wellington, oo dhinaca bari ka xigta caasimadda, sida ay sheegtay Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranku.
Booyada Shidaalka ayaa qaraxday, waxaana ku dhintay in ka badan 100 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro kale, dhibaatadu waxay faraha ka baxday kaddib markii ay dadku isugu soo baxeen goobta masiibadu ka dhacday iyagoo doonaya inay dhurtaan shidaal da’ayey, sida ay sheegeen saraakiisha iyo goob-joogayaashu.
Dalkan waxaa ka jira saboolnimo gaamurtey oo qoto dheer, dad badan ayaa ilawsanaa naftooda iyagoo ku qamaamayey goobta si ay shidaalka ololayey wax uga helaan, goob joogayaal meesha joogey ayaa warkaa sheegay. Ilaa hadda lama oga waxa sababay in shidaalku daato balse waxaa dhacay qarax xoogan oo meeshiiba dab iyo holoc u bedelay. Dalka ayaa lagaga dhawaaqay saddex maalmood oo baroor diiq qaran ah.
Previous articleXog-Tilaabo ay qaaday NISA oo wal wal ku beertay Musharaxiinta iyo Ahlusuna.
Next articleUgu yaraan 20 caruur ah ayaa ku dhintay dab ka kacay iskuul kuyaal Niger